Raisal Wasaare Hailemariam Desalegn Oo Mar Labaad Ladoortay - Cakaara News
Raisal Wasaare Hailemariam Desalegn Oo Mar Labaad Ladoortay
Addis Ababa(CN) Isniin, 5tii October 2015, wuxuu raisal wasaaraha maanta golaha wakiilada shacabka dalku udoorten inuu wadanka hogaamiyo mar labaad 5ta sano ee soo socota macalin, madaxwayne kuxigeen iyo madaxwaynaba kasoo maray jaamacada Arbaminch ee kutaala deegaanka Shucuubaha koonfurta dalkeena itoobiya. Halkaas oo uu kamuujiyay runtii dadaal, karti, isbadal kor uqaaday heerka iyo sumcada jaamacada.
kadibna, dadaalada iyo isbadalada uu ukeenay jaamacada waxay dhaxalsiiyeen inuu noqdo Madaxwayne kuxigeenka deegaanka koonfurta dalka.
Mudo gaaban gudaheedna marka deegaanku kayaabay waxqabadkiisa aan inaba sakatiga lahayn ayuu deegaanku udoortay inuu noqdo Madaxwaynaha deegaankaas.
kadibna isagoo leh awood wasiirnimo ayuu wuxuu noqday lataliyaha khaaska ah ee Raisal wasaarihii hore ee dalka mudane Meles senawi halkaas oo uu kulayimid xiligaa nidaamyo wanaagsan iyo isbadalo waa wayn oo runtii wax kabadalay qorshayaashii horumarka.
Ururka Dhaqdhaqaaqa Dimoqraadiga Shucuubaha Koonfurta Itooiya (SEPDM) ayaa kadib markay arkeen kartida hailemariam, awoodiisa iyo aqoontiisa hogaamineed udoortay inuu noqdo gudoomiyaha ururka.
Waxaana xilkan ururkiisu udoortay ugu xigay inuu noqday Wasiirka Arimaha Dibada ahna Raisal wasaare kuxigeen. intuu xilkan hayayna wuxuu layimid isbadalo aan inaba caadi ahayn. Wuxuu shacabka caalamka baray in magacii madoobaa ee itoobiya looga yaqaanay caalamka uu u badalo magaca maanta lagu soo wada hiranayo. wuxuu kor uqaaday siyaasada arimaha dibada isagoo adeegsanaya siyaasada horumarineed ee itoobiya.
Geeridii kadiska iyo lamafilaanka ahayd ee raisal wasaarihii hore mudane Meles kadib iyadoo caqabado badana jiraan ayay gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee dalku isugu yimaadeen kulan ay kuraadinayaan cidii wadanka sii hogaamin lahayd iyagoo shuruudo adagna kuxidhaya. xiligan oo ahaa xili aad xasaasi u ah ayaa waxay labada gudi isla qaateen inuu Hailemariam desalegn yahay cida kali ah ee hogaanka wadanka qaban karta isagoo sharciyana markaa ahaa raisal wasaare kuxigeen ayuu noqday raisal wasaaraha JDFI sidaasna ayuuna ilaa maanta kusoo waday.
Hadaba ururka yehadhig ayaa kadib shuruudaha uu buuxiyay mar labaad u doortay inuu sii hogaamiyo wadanka baarlamaankuna codbuuxa ugu ansixiyay.
Ugudanbayna, xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, Afhayeenka golaha xildhibaanada ahna Gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, Madaxa Xarunta Dhexe lehna Awood Madaxwayne kuxigeen mudane Cabdicasiis Maxamed, Madaxwayne kuxigeenada, gudiga fulinta, golaha dhexe, golaha kabineega waxay utahniyadaynayaan Raisal wasaare Hailemariam Desalegn oo runtii ah siyaasi rug cadaa ah, lehna tab iyo xeelad uu ku hogaamiyo wadanka xilka mar labaad loo doortay. Shirkan oo ay goob-joog ka ahaayeen deegaankeena xildhibaano, madaxda ugu sareysa deegaanka oo ugu horeeyo madaxwaynaha, afhayeenka, xarunta dhexe iyo madaxwayne kuxigeeno.